Ny halalin'ny tranon'ny trondro an-dranomasina dia farafahakeliny farafahakeliny ny halalin'ny fanambanin'ny tranom-borona mba hisy fiatraikany kely amin'ny kalitaon'ny rano, tontolo iainana bentika, ary toeram-ponenana mora tohina. Ity halalin'ny soso-kevitra ity dia miankina amin'ny toeram-ponenana eo an-toerana sy ny anton-javatra hafa. Miaraka amin'ny fikorianan'ny ankehitriny ambany kokoa, ny halalin-javatra lehibe kokoa dia hahafahan'ny fitaterana rano misimisy kokoa hivezivezy any ambany ary hiparitaka any amin'ny tontolo iainana. Miankina amin'ny tontolo iainana benthic, ny rafitry ny vatofantsika isan-karazany dia mila hasiana tombana hahafahana mametraka ny tranony mety. ref Ny drafitra mety mandritra ny fisafidianana ny karazana tranokala sy ny tranom-borona dia ilaina amin'ny famaritana ireo faritra misy halalin'ny ranomasina.
Raha manao fandalinana fahafaha-mitondra / mamorona maodely manokana ho an'ny toerana dia iray amin'ireo fomba marina indrindra hanombanana ny fahaiza-mitondra, matetika lafo be ireo maodely ireo ary mitaky angon-drakitra sarotra izay mety tsy ho mora raisina. Araka izany, misy firenena sasany izay nampiasa fomba hafa hametrahana fetra amin'ny habetsaky ny fiompiana anaty rano mety hitranga ao anaty rano, toy ny fametrahana fatra isan-jaton'ny rano betsaka indrindra izay azo ampiasaina amin'ny fiompiana anaty rano na mametraka fepetra amin'ny halavirana farany eo anelanelan'ny toeram-piompiana. Ny halaliny, ny onja, ny fisondrotana, ny karazan-tsakafo, ny habetsahan'ny sakafom-biby ary ny karazany voafantina dia anton-javatra izay hisy fiatraikany amin'ny fahafaha-mitondra ny faritra iray. ref